Hafa tokoa ve ny fitondran-tena momba ny fiantsenana an'arivony taona? | Martech Zone
Hafa tokoa ve ny fitondran-tena momba ny fiantsenana taonarivo?
Talata, Jona 20, 2017 Douglas Karr
Indraindray aho misento rehefa maheno ny teny hoe arivo taona amin'ny resaka marketing. Ao amin'ny biraonay, manodidina an'arivony taona aho ka noho izany ny fitsipi-pitondran-tena sy ny fahazoana miasa no mahatonga ahy ho trotraka. Ny olon-drehetra fantatro fa ny taona dia manenjika ny vodiny sy ny fanantenana amin'ny ho avy. Tiako ny millennial - saingy tsy mino aho fa tototry ny vovoka majika izay mampiavaka azy ireo amin'ny olon-kafa.
Ireo olona an'arivony taona iarahako miasa dia tsy natahotra… toa ahy tamin'io taona io. Ny fahasamihafana tena hitako dia tsy an'ny taona, fa amin'ny toe-javatra iainana. Ny an'arivony taona dia mihalehibe amin'ny vanim-potoana iray izay mandroso haingana ny fandrosoana ara-teknolojia. Atambaro ny fanantenana, ny herim-po ary ny haitao misy, ary mazava ho azy, ho hitantsika fa hipoitra ny fihetsika tsy manam-paharoa. Raha ny hevitro dia 73% amin'ny # millennial no mahavita fividianana mivantana amin'ny findainy finday
Satria tanora izy ireo ary tsy nanangona harena, ny fividianana fahefana isaky ny arivo taona dia tsy lehibe noho ny taloha intsony fa ny isan'ireo arivo taona dia mitombo. Ary rehefa mihalehibe ny haren'izy ireo sy ny isany, dia ampahan'ny mponina tsy azo odian-tsy hita tsotra izao.
Vao tsy ela akory izay, mety efa naheno ny tranga toast avokado, izay nisy rivo-doza nilaza fa tsy mahazaka zavatra ireo millennial satria nandany ny volany tamin'ny rendrarendra tsy zakany. Araka ny a Bank of America Ny fandinihana Merrill Edge, ireo millennial dia mety hanao laharam-pahamehana ny dia, ny fisakafoanana ary ny gym ao aminy amin'ny ho avy ara-bola. Raha ny tenako manokana dia tsy azoko antoka fa ohatra iray amin'ireo olona an'arivony tsy tompon'andraikitra io, mety hidika izany fa manome lanja kokoa ny traikefa sasany mihoatra ny hafa ny zokintsika tanora.
Izany dia mandeha an-dàlana amin'ireo millennial mandany vola amin'ireo orinasa mihaona amin'izy ireo ny finoana ny tontolo iainana sy ny fiaraha-monina. Raha manana ianao vola kely kokoa mandany ary manantena ny hitondra fiatraikany bebe kokoa amin'izany, mandany hariva miaraka amin'ny namana ao amin'ny cafe manodidina izay manolotra kafe avy amin'ny loharanom-bola maharitra ary manome fanampiana ho an'ny fiarahamonin'izy ireo dia misy dikany tanteraka. Noho ny Internet sy ny tambajotra sosialy, ireo fanapahan-kevitra momba ny fividianana ireo dia azo karohina mora foana - tsy izany fony aho mbola kely!
Raha tian'izy ireo ny marikao, dia hihira ny fiderana anao amin'ny olona rehetra fantany izy ireo. Raha tsy izany, dia hiantso haingana anao izy ireo. Inona no dikan'ireo fironana an'arivony taonan'ny mpivarotra ireo? Midika izany fa mijanona ao ambadiky ny vokatra misy kalitao. Mianatra mifandray amin'ny fangatahan'ny mpihaino isan-karazany izy. Ny maha-mavitrika fa tsy mihetsika dia handeha lavitra hanatsara ny tsy fivadihan'ny marika, hampitombo ny fitazonana ny mpanjifa, ary hahazoana fidiram-bola bebe kokoa. Ekipa atiny IMI
Ianaro ny fomba fanovan'ny taonarivo ny tontolon'ny fiantsenana sy ny fomba tsara indrindra hifandraisan'ity taranaka ity.
Tags: antonyHafanàm-po anantony tontolo iainanaFacebookIMIhery miasa manginatsy fivadihanafihetsika arivo taonafahatokiana an'arivony taonafiantsenana arivo taonatoetran'ny fiantsenan'ny arivo taonafironana an'arivony taonamillennialsfitaovana findayfiantsenana findayÔmnia-fantsonaonline shoppingentanalevitra fanapahan-kevitranaotyprograma tsy fivadihana fivarotanaRetailerantony ara-tsosialy
Ny antsipiriany rehetra ilainao hilahatra amin'ny Marketing SEO eo an-toerana
Google Mahatonga ny sary ho an'ny daholobe ho toy ny stock Photography, ary olana izany